Ungayihlela kanjani i- "Memories" ku-iOS 10 | Ngivela kwa-mac
Ungahlela kanjani "Izinkumbulo" ku-iOS 10
Kufakiwe | | Izifundiswa
Ngaphakathi kohlelo lokusebenza olusha lwe-iOS 10 Photos, sithola isigaba esibizwa nge- "Memories." Lesi sici esisha siyazenzakalela futhi sakhiwe ebusweni obusha, into kanye nemisebenzi yokubona indawo ehlanganiswa nezithombe.
"Izinkumbulo" yilezi Ama-movie azenzakalelayo adalwe kusuka ezithombeni nakumavidiyo athathwe ngesikhathi nasendaweni ethiler, isibonelo, ohambweni lokugcina olwenzile. Izithombe azidala yedwa, ecwaninga isondo lakho, kodwa futhi ungahlela futhi uhlele iMemori ngayinye ngendlela othanda ngayo ngendlela elula kakhulu.
1 Funda ukuhlela izinkumbulo zakho ku-iOS 10
2 Ukuhlelwa Okulula Kwezinkumbulo
3 Uhlelo Olunzima Lwezinkumbulo
Funda ukuhlela izinkumbulo zakho ku-iOS 10
Dlulisa amehlo kuhlelo lokusebenza lwezithombe ku-iOS 10 ukuthola isigaba esisha se- "Memories". Lapho ungahamba phakathi kwezinkumbulo ezahlukahlukene bese ukhetha ukuthi uhlele noma wabelane ngazo. Uma ungena ekubukweni okuningiliziwe ngakunye kwalezi zinkumbulo, uzothola isifinyezo sezithombe namavidiyo afakiwe. Futhi uma ucindezela u- "Show all", uzobona zonke izithombe namavidiyo afakiwe.
Qhubeka uskrolela phansi futhi uzokwazi ukubona indawo lapho izithombe, izithombe ezisondele, nezinye izinkumbulo zathathwa khona. Futhi nabantu abavela kulezo zithombe namavidiyo.
Izinketho ezimbili zokugcina zizokuvumela ukumaka noma ukumaka imemori njengentandokazi noma ukuyisusa ngokuphelele. Ungakhohlwa ukuthi uma ususa imemori izosuswa kuwo wonke amadivayisi akho naku-iCloud.
Ukuhlelwa Okulula Kwezinkumbulo
Lapho amaMemory okuqala esevele, ungawahlela kalula. Ukuze wenze lokhu, landela lezi zinyathelo ezilandelayo:
Thepha iMemori phezulu kwesikrini ukuze uyidlale.
Cindezela noma ikuphi esikrinini ukuletha izilawuli zokuhlela bese ucindezela inkinobho yokumisa isikhashana.
Khetha ingqikithi engokomzwelo ofuna ukuyinikeza iMemori yakho, efana nokuthi "ujabule," "uthambile," noma "amaqhawe" ngokuskrola kwesokunxele noma kwesokudla ngaphansi kweMemori.
Ngemuva kokuthatha isinqumo ngesihloko, khetha ubude besikhathi: bufushane (kufika kumasekhondi angama-20), maphakathi (kufika kumasekhondi angu-40) noma ubude (kufika kumzuzu owodwa). Ngokuya ngokuqukethwe okufakiwe, ungabona kuphela ezimbili zalezi zinketho, noma eyodwa kuphela.
Uma iMemori ikuthandile, cindezela inkinobho yokwabelana ekhoneni elingezansi kwesokunxele ukukhombisa iMemori yakho kubangani nomndeni nge-imeyili, Imilayezo, i-AirPlay, i-Facebook, nokunye okuningi.
Uhlelo Olunzima Lwezinkumbulo
Uhlelo lokusebenza lwezithombe ze-iOS 10 likuvumela futhi ukuthi ungene ngokujulile ekuhleleni nokwenza ngezifiso izinkumbulo zakho. Ngenxa yamathuluzi wokuhlela ungashintsha noma yisiphi isithombe noma ividiyo eqoqweni. Ungengeza futhi ususe izithombe namavidiyo kwiMemori. Ake sibone ukuthi ungakwenza kanjani:
Uma usesikrinini sokuhlela esilula esisibonile ngaphambili, cindezela inkinobho yokuhlela ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini, bese uchofoza ku- "Izithombe namavidiyo".
Ukususa okuqukethwe, thola isithombe noma ividiyo okukhulunywa ngayo ngokuskrola kwesokunxele noma kwesokudla esikrinini.
Cindezela isithonjana sodoti ngezansi kwesokudla kwesikrini ukuze ususe isithombe noma ividiyo yale Memori.
Ukwengeza imidiya, thepha isithonjana se - "+" ezansi kwesokunxele kwesikrini.
Lapha ungabona zonke izithombe namavidiyo atholakalayo ukufaka kule Memory, akhethwe ama-algorithms ahlakaniphile we-Apple.
Thepha kunoma iyiphi imidiya ukuze uyingeze ku-Keepsake (lesi sikrini singasetshenziselwa ukususa okuqukethwe ngokususa ukukhetha uphawu lokuhlola).
Chofoza ku- "Kwenziwe."
Ungahlela noma iyiphi ividiyo kulesi sigaba sesicelo. Uma usuyitholile esigabeni esithi "Izithombe namavidiyo", ungakhulisa noma ufinyeze isiqeshana ngasinye ngokuhudula ukuqala kwaso bese uphela kuthuluzi lokuhlela elizovela engxenyeni yenja yesikrini.
Uma iMemori yakho isilungile, cindezela umcibisholo obuyela emuva ukuze ubuyele esikrinini esikhulu sokuhlela.
Kulesi sigaba ungahlela futhi isihloko, ubude besikhathi, ngisho nomculo yememori ngayinye. Ungangeza noma imuphi umculo olandwe kulabhulali yakho noma ukhethe kulawo atholakalayo.
Ukugcina unomphela zonke izinguquko, cindezela "KULUNGILE" bese uzobuyela kuthuluzi lokuhlela eliyisisekelo lapho kuguqulwa khona izingqikithi nobude. ukubuyela emuva kumenyu eyisisekelo yokuhlela enezingqikithi ezingokomzwelo nemisho emide yokubamba. Nakulokhu futhi, lapha ungasebenzisa isandiso sokwabelana ukusabalalisa iMemori yakho entsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungahlela kanjani "Izinkumbulo" ku-iOS 10
Siyabonga ngolwazi. Ngicabanga ukuthi ngiyaxaka namuhla, ku-iPhone 5 angiziboni lezi "zinkumbulo" noma lokho noma akuyona le divayisi
UJoseph Alfocea kusho
Sawubona. Uma usanda kuthuthukisa, kufanele uvumele ubuhlakani be-Apple ukuthi benze umsebenzi wayo ukuze iqale ukukukhombisa izinkumbulo. Ngokwazi kwami, lesi sici sihambisana ne-iPhone 5.
Phendula uJoseph Alfocea
Namanje angiqondi ukuthi kungani bengazifihli izithombe nge-password ukuze zibe yimfihlo, bazifaka zifihlwe bese zivela esondweni, uthatha isithombe ozishuthe sona bese ziphuma ngama-albhamu amabili, angiyithandi Ukuphathwa kwezithombe ze-iOS nhlobo, ukuphela kwento engingayithandi.
Iphone5c inenketho yesikhumbuzo?
Ungasikhetha isithombe sekhava kwifilimu yememori?
Inkinga ukuthi yize ama-video emikhulu, uma uwafaka ku-Facebook abonakala enekhwalithi esabekayo 🙁 Noma yimiphi imibono yokuyixazulula? Ngibonga kakhulu!!!
UNuria Aragon kusho
Uma kwenzeka. Kumodi yokuhlela, ikubuza ngqo isithombe sekhava (endaweni efanayo lapho ongasho khona ukuthi ufuna ibe yinde kangakanani, igama lesihloko, njll.)
Phendula uNuria Aragón
Yebo. Ungakhetha isithombe sekhava sesikhumbuzo. Kumodi yokuhlela ikubuza ngqo isithombe sekhava (endaweni efanayo lapho ungasho khona ukuthi ufuna ibe yinde kangakanani, igama lesihloko, njll.)
Angikutholi lokhu ku-iPhone 5c, ngamazwana engiwafundile kubonakala sengathi akusimina ngedwa osho okufanayo
UJosé Manuel kusho
Ngingathanda nokwazi ukuthi ungasikhetha yini isithombe sekhava sezinkumbulo.
Phendula uJosé Manuel
UJulian Serrano kusho
lapho ngiya kukhetha ingoma yememori, ngeke
Phendula ku-julian serrano
Angikwazi ukushintsha ukuhleleka kwezithombe, kungenzeka yini?
Hawu, ufuna ngikutshele ini? Lokhu kungenzeka akusebenzi kahle kimi. Lapho ufuna imemori njengoba kwenza i-iPhone, kulungile. Kuyinto enhle. Kepha lapho ufuna ukuyihlela, akusenani. Uhlela ubude bamavidiyo avela kuwo, uma ngezwi noma cha, ususa ezinye izithombe bese ufaka ezinye, ubeke omunye umculo, wengeze isihloko nesithombe sekhava ..., konke kuphuma kahle, konke kubukeka kukuhle kepha uma Ukunika ukudala inkumbulo, amanye amavidiyo abenezwi aphuma ngaphandle kwezwi, ushintsha okuvundlile kube ukuma mpo kwezinye izithombe, ezinye ezikhethiwe aziveli ziphinde ezinye, njll.
Woza, njalo kufanele ngihlele kabusha futhi ngihlele imemori futhi angivamile ukukuthola ukuthi kukhiqize konke kahle.
Umbono muhle kepha uhlelo lwehluleka kakhulu.
Futhi nginekhono eligcwele le-iPhone 11 Pro Max, elinesoftware ebuyekeziwe. Ngakho-ke inkinga ayikho ...
Nakhu ukuthi isithombe esithombeni sisebenza kanjani ku-iTunes 12.5.1
Thuthukisa ukusebenza nge-iOS 10 ku-iPhone yakho noma ku-iPad